Kubatsirwa kwe Cloud Computing uye CCSP Certification
Makomborero e Cloud Computing
Guaranteed Cloud Security Professional certification-its components uye zvipo
Chinangwa uye zvibatsiro zvechikoro
Mutsara unonyanya kufarirwa muTIT world - cloud computing, inotaura nezvechikwata chekombiyuta umo computational assets seCUU, RAM, bandwidth, disk space, nezvimwe zvakadaro zvinotumirwa pamusoro pewebhu. Zvinhu izvi zvinoumbwa nehutano hwemashupi edziviriro hunoiswa mune zvakanyanya kuchengetwa deta rinotarisa kumunhu wekunze wekodhi-co-ops. Kuipa kwemaitiro ekugadzirisa, kushandiswa kwehutano uye unhu husingaverengeki pazvinhu zvakakosha zvinoshandiswa zvakakosha kana kucherechedza zvikamu zvegore computing. Iyo inowedzera kuchenesa kupera kwezvinhu sezvo inoshandisa 'kubhadhara sezvaunoshandisa' kuratidzira apo vapedza kuguma vanoda kubhadhara nokuda kwezvinhu zvavanokumbira uye vanopedza.
Cloud computing yave yakatanga kutora nhanho sekupedzisira nemasangano ose makuru uye maduku pasi rose achishandisa simba re cloud computing kuti azadzise mabhizinesi avo uye kuwedzera ruoko rwepamusoro mune zvekutengeserana.
The Certified Cloud Security Professional kana CCSP ndiyo yekupedzisira kwekusanganiswa kweMafungiro eWorld Security (CSA) uye (ISC) ², iyo yakagadzirirwa kuwedzera uye kushandisa zvidzidzo zviviri zviripo: (ISC) ² Certified Information Systems Security Professional neCSA Certificate yeWef Security Security Knowledge.
Cloud computing sezvataurwa pamusoro apa inovimbika, inogadzirika uye savvy. Kunyange zvakadaro, hurumende dzinotungamirirwa pamusoro pehutano hwakasununguka hunoita kuti hutambudzike kuhutano hwekunze kwekunze. Pasi pemamiriro ezvinhu akadaro, kunzwisisa gore rinokonzera dambudziko rekuchengetedza dambudziko uye kusika nzira dzekudzikisa kukanganisa kwavo kunokosha zvikuru. Shamwari dzakagadzirwa nepamusoro hazvikwanisi kutakura kurasikirwa kwebhizimisi ravo rekushandisa dhiyabhorosi uye mumutowo iwoyo unoda vashandi vanogona vane ruzivo uye unyanzvi kuti vashandise zvakanaka nemhando ipi zvayo yengozi.
Nzira yeKachengeteka yeClass Security (CCSP) inobva kuInnovative Technology Solutions inoda kukugadzirira iwe yose iyo inonyanya kukosha pamusoro pekwanisi ye cloud computing, zvigadziro mune zvekuchengetedza izvo zvinogona kushandiswa zvisina kunaka, uye kuti ungazvifananidza sei kuvimbisa nzvimbo yakachengeteka uye yakachengeteka. Ichi chinyorwa chinobva pachigaro chepamusoro chepamusoro chinokubvumira kuti uite zvakanyanya kuwanda kwekuchengetedza masimba uye kubatsira sangano rako kushandisa simba rakakura re cloud computing risina kuenda kune ngozi kunekuremekedzwa kwe data.
9 Best Training Courses neGoogle Cloud Platform